Susa i-jack yomsindo kwi-OnePlus 6T ibe sisigqibo esinzima kakhulu | I-Androidsis
Ukuba nesidibanisi sejack yeaudio kwifowuni efana i-OnePlus 6T inokuba sisibetho Ukuthengisa. Kodwa xelela i-CEO ye-OnePlus eyenze yacaca gca: ukususa i-audio jack kwi-equation yayisisigqibo esinzima.
Enkosi kwinto yokuba iGlass ngokwazo isanikela ngejack yeaudio, Baziguqulela ngokwabo kwiifowuni ezinqwenelekayo ngabantu abaninzi abangasiqondiyo isizathu sokuba kufuneka basebenzise iadaptha yohlobo C lwe-C kwii-headphone zabo, okanye bathenge ezintsha ukunqanda ukususa izixhobo ezingaphezulu.
Namhlanje sifundile ukuba iyakuqaliswa nini i-OnePlus 6T. Isicatshulwa esenza uPete Lau, CEO kunye nomsunguli we-OnePlus, woyika kakhulu. Kwaye ikakhulu kungenxa yokuba i-6T iya kuba yifowuni eyahlukileyo kwi-OnePlus 6. Kungenxa yesi sizathu sokuba iphakamisa ulindelo oluninzi; kanye xa i-Pixel 3 imalunga kwaye i-iPhone entsha kunye neNqaku 9 zifikile.
U-Lau ucacisa ukuba ibiyi- yezona zigqibo zinzima susa i-jack audio kwi-OnePlus 6T. Utsho ukuba owona msebenzi unzima kukufumana ibhalansi yokudibanisa iindlela zamvanje kwifowuni kwaye zeziphi ekufuneka zilandelwe njengoko zazinjalo.
Esona sizathu sibalulekileyo sokususa i-jack audio kwi-equation ye-OnePlus 6T ibikhonaokanye isidingo sendawo engaphezulu yeyiphi into enokuba ngumfundi wokufunda ngeminwe olala nje ngezantsi kwesikrini. Kwaye yile sensor ithatha indawo eninzi. Esinye isizathu esinikiweyo kukuba baninzi abasebenzisi abasebenzisa ii-headphone zeBluetooth. Ngokwedatha yabo, ama-59% sele sele esebenzisa ii-headphone ezingenazingcingo ukwenza iminxeba nokumamela umculo.
Kule nto ndineeBullets ezingenazingcingo, ke hamba ulungiselela ukuthenga kwakho ukuba ufuna ukuba ne-OnePlus 6T, kuba awuyi kuba nejack yeaudio. Isigqibo esinzima, kodwa esele senziwe yile nkampani. Siza kubona ukuba isebenza njani kwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » OnePlus » Umphathi omkhulu we-OnePlus uyenza icace into: ukususa i-audio jack bekusisigqibo esinzima
Uyenza njani ikhadi le-ID le-Instagram: yintoni entsha kwinethiwekhi yoluntu ukwenza ukuba kube lula ukulandela